Muxuu ka yiri Cristiano Ronaldo in Zidane uu iska casilay shaqada tababarka ee kooxda Real Madrid? – Gool FM
Muxuu ka yiri Cristiano Ronaldo in Zidane uu iska casilay shaqada tababarka ee kooxda Real Madrid?
(Madrid) 31 Maajo 2018. Cristiano Ronaldo ayaa fariin la wadaagay macalinkii hore ee kooxda Real Madrid Zinedine Zidane, kaasoo ku dhawaaqay inuu ka tagayo shaqada tababarka ee garoonka Santiago Bernabéu.
Ronaldo ayaa dareen farxadeed ka muujiyay mudada uu kala hoos shaqeeyay Real Madrid Zinedine Zidane, isagoo bartiisa Instagram-ka soo dhigay fariin uu ku macsalaameenayay Zidane.
“Waan ku faraxsanahay inaan noqdo mid ka mid ah ciyaartoyda aad soo leelisay, macalinkeyga, aad ayaad u mahadsan tahay”.
Wargeyska Isbaanishka ee AS ayaa la xiriiriyay bixitaanka Zidane mustaqbalka Ronaldo, wuxuuna xaqiijiyay in go’aanka macalinka reer France uu soo dadajin doono bixitaanka Cristiano kadib marka uu furmo suuqa xagaaga.
Cristiano ayaa horey u shaki galiyay mustaqbalkiisa Santiago Bernabéu kadib kulankii finalkii Champions League ee sabtidii lasoo dhaafay, waxaana la sugi doona sida uu noqon doono mustaqbalka Ronaldo kadib go’aankii Zidane.